Galmudug iyo Koofur Galbeed oo ka horyimid jadwalka guddiga doorashada
Maamul goboleedyada Galmudug iyo Koofur Galbeed ayaa ka horyimid go'aan shalay kasoo baxay guddiga doorashada heer Federaad, kaas oo lagu faah-faahiyay dhammeystirka xildhibaannada Baarlamaanka ee labada Aqal, waxayna sheegeen in Madasha Wadatashiga Qaran ay leedahay go'aanka dhammeystirka.
"Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal waxay qaadeen tallaabo ka baxsan awooddooda, waxeyna kasoo horjeedaa heshiiyadii iyo habraacyadii Doorashooyinka" ayaa lagu yiri warsaxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Galmudug.
"Dowladda Galmudug waxay caddeyneysaa inaysan aqbali doonin jadwal iyo go’aamo aan kasoo bixin Madasha Wadatashiga Qaranka. Galmudug waxay ka digeysaa waxkasta oo caqabad ku noqon kara dhammeystirka hanaanka doorashooyinka" ayuu raaciyay bayaanka Galmudug.
Maamulka Koofur Galbeed ayaa isna sheegay inaysan 'waxba kala socon' Jadwalka uu faafiyay guddiga doorshada. "Koonfur Galbeed waxay kaliya aqbalaysaa jadwal iyo qorshe ay ku heshiiyeen Madasha Wadatashiga Qaran kaasoo ku yimid wadatashi ay ka qeybqaateen dhammaan Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir" ayaa lagu yiri warsaxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Koofur Galbeed.
Guddiga FEIT ayaa sheegay inay kaashanayaan xafiiska Ra'isul Wasaraha, si ay u dhammeystiraan hannaanka doorashada, waxayna jadwalkii ay shalay soo saareen ku sheegeen in bish April 15-keeda la dhaarin doono xildhibaannada labada Aqal.